Home Wararka Agaasimaha xafiiska siyaasadda AMISOM Batabtunde oo maxkamad ku taal Kenya ku heshay...
Agaasimaha xafiiska siyaasadda AMISOM Batabtunde oo maxkamad ku taal Kenya ku heshay danbi
Agaasimaha xafiiska Siyaasada ee Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Babatunde Taiwo, ayaa maxkamad ku taal Nairobi ku heshay dambi, sida ay MOL ogaatay
3-dii Agoosto 2016, Babatunde waxaa gacan u geystay haweeney la shaqeysay oo magaceeda yahay Premdeep Bahra. Taasoo keentay in shaqada looga eryo fal danbiyeedkaas uu ugu gacan qaaday haweeneydaas. Balse Batabtunde ayaa markii dambe wuxuu ku dacweeyay Sahan Afrika in si qalad ah shaqada looga eryay, isagoo dalbaday ku dhawaad ​​nus milyan doolarka Mareykanka ah in loo siiyo magdhow.
Go’aankiisii ​​22kii Nofeembar 2019, Qaadi Onesimus ayaa meesha ka saaray sheegashadii Babatunde wuxuuna ku helay in uu galay danbi, isagoo sii raaciyay “shaqo-bixiyuhu wuxuu cadeeyay inay jirto sabab macquul ah oo si guud loogu eryo eedeysanaha.” Xukunka ayaa si gaar ah wax u dhimaya tan iyo markii Midowga Afrika uu bilaabay baaritaan heerkiisu sareeyo oo ku saabsan dhibaatooynta loo geysto dumarka bishii May 2018.
Isku day musuqmaasuq ah oo lagu nadiifinayo rikoodhkiisa Babatunde ayaa lagu sheegay bogiisa uu ku leeyahay LinkedIn in uu si joogto ah uga soo shaqeeyay Qaramada Midoobay tan iyo sanadkii 2010, laakiin baadhitaannadeenna ayaa shaaca ka qaaday inuu runtii ahaa lataliye xilli-ku-meel-gaadh ah ka shaqeeya Sahan Afrika intii u dhexaysay 2013 iyo Agoosto 2016, intii aanu u gacan qaadin haweeneydii la shaqeyneysay.
Eedeymaha anshax xumada ah ee ay geystaan ​​ciidamada AMISOM, gaar ahaan haweenka, inta lagu guda jiro howlgalada ka socda Soomaaliya ayaa waxay aad uga careysiinayaan in sarkaal heer sare ah oo lagu helo dambiga noocaas oo kale ah inuu ku hayo magaalada Muqdisho xilal muhiim ah.
Sarkaalkan aya waxaa uu saaxib dhow la yahay Wasiirka Qorsheynta JFS Jamaal Maxamed Xasan iyo La taliyaha Amniga ee MW Farmaajo Cabdi Saciid Muuse, waana labada shaqsi ee ka danbeeyay in Batabtunde loo magacaabo agaasimaha xafiiska siyaasadda ee AMISOM waxayna labada masuul iyo MW Farmaajo u qoreen warqado ay ku weydiisanayaan AMISOM in Batabtunde uu u qalmo jagada agaasimaha xafiiska Siyaasadda ee AMISOM.